IT Trends - MYSTERY ZILLION
June 2009 edited October 2010 in My Article
ဆောင်းပါးတစ်ခုလို သဘောထားရေးပေမယ့် ကျနော့ အာဘော်တွေပါနေရင် သည်းခံပါ။ အကြံပေးတာ သက်သက်ပါ။
ကျနော်တို့ဆီက IT စိတ်ဝင်စားကျတဲ့လူတွေ ( လူငယ်တွေတင်မဟုတ်ပါဘူး) တစ်ခါတစ်လေမှာ ဘယ်လမ်းကြောင်းလိုက်ရမလည်းတို့ ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲတို့ စဉ်းစားပြီး ယောင်လည်လည်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နည်းနည်းလည်း ရောထွေးနေကျသလိုပဲ။ မလေ့လာလို့ မဟုတ်ကျပါဘူး။ လေ့လာစရာ Infrastructure ပိုင်းအားနည်းနေလို့ထင်ပါတယ်။ Network engineer ဖြစ်ချင်လို့ MCSE လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ ညီတော်နောင်တော် တော်တော်များများမှာ basic networking knowledge မရှိတာတွေ့တွေ့နေရလို့ပါ။ MCSE ဆိုတာလည်း Networking စစ်စစ်မဟုတ်ပါဘူး ။ လမ်းကြောင်းလွဲနေတယ်လို့ထင်တယ်။ အဲဒါကြောင့် Rough idea လေးလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရဖို့ Imagine လုပ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။
Professional လမ်းကြောင်းတွေလို့ပြောရင် အခြေခံအားဖြင့်
4) Network Engineering
ဒါတွေကို beginner / intermediate / advance ပုံစံမျိုးပြောကြည့်မယ်။ Role and responsibilities တွေ လိုအပ်တာတွေ။
Security ကို Category တစ်ခုလို ထဲ့မပြောတော့ဘူး။ Security မှာ Beginner ဆိုတာမရှိလို့ပါ။ IT သမားတွေရဲ့ second step တွေထဲက တစ်ခုပါ။ အပေါ်က Engineering တစ်ခုခုမှာ Intermediate လောက်မဟုတ်သေးပဲ Security advisory ဖြစ်ဖို့မကြိုးစားသင့်ပါဘူး။
သိပ်ရှည်သွားနိုင်လို့ (ကိုယ့်ဟာကိုယ်သိတယ်) post တွေခွဲရေးပါမယ် ။ ကျနော့ ရပ်တည်မှုက Network and Systems မို့အဲအပိုင်းတွေကို အဓိကထားမိမယ်ထင်ပါတယ်။ လူသိများတဲ့ Software Engineer လေးနဲ့ စရအောင်
Role and responsibility ကိုပြောရင် အခြေခံအားဖြင့် ဒီသုံးခုရှိမယ်
3) Analyst ( or) Architect
လွယ်လွယ်ပြောရင် သူက Coder ပါ။ Language တစ်ခုခုကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ သူအတွက် Business Logic ကောင်းဖို့မလိုပါဘူး။ ပေးလာတဲ့ module ကို ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်နိုင်ရပါမယ်။ Architect တို့ Senior တို့ကပေးတဲ့ Functional spec , Design spec တွေကြည့်ပြီး သူတို့ပြောတာလုပ်ပေးရုံပါပဲ။ ဒီ button ကိုနှိပ်ရင် Database မှာ ဒါတွေ update လုပ်မယ်ဆိုရင် အဲဒီအတိုင်းဖြစ်ရင် သူတာဝန်ကျေပါပြီ။ တစ်ခြား Form တွေမှာဘာဖြစ်မလည်းတို့ နောက်ဆက်တွဲတွေက သူ့ဂရုမစိုက်လို့ရပါတယ်။
Language တစ်ခုခု ကျွမ်းကျင်ရပါမယ်။ Communication ကောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပြောတာနားမလည်လို့ တလွဲတွေလုပ်တာမျိုးဖြစ်ရင် မကောင်းပါဘူး။ Diploma holder တွေရဲ့ starting point ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ Average diploma holder ပေါ့။ အချို့ degree holder တွေလဲ ဒီအဆင့်က စကျတာပါပဲ။
သူလည်း language တစ်ခုပဲကျွမ်းကျင်ရင်လည်းရပါတယ်။ Structure ပိုင်းနဲ့ Business Logic လိုပါတယ်။ Framework တွေရဲ့အကြောင်း အားသာချက် အားနည်းချက်တွေလည်း သိသင့်ပါတယ်။ Junior အတွက်ဆိုရင် Architech / Senior တွေပေးတာလိုက်လုပ်ရတယ်ဆိုပေမယ့် Business logic နားလည်ရပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ရင် နောက်ကျ ဘယ်လိုပြသနာလေးတွေရှိလာနိုင်တယ်၊ တခြား module မှာဘယ်လိုပြသနာရှိနိုင်တယ်၊ Future extension မှာ ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတာတွေ ထဲ့တွက်တတ်ရပါတယ်။ Programming ပိုင်း ပိုင်နိုင်ရသလို Logical thinking ကောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Database structure တွေ logic တွေနားလည်ရပါမယ် ကျွမ်းကျင်ရပါမယ်။ တခြား development team တွေ engineer တွေနဲ့ closely အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။
Software engineering ပိုင်းကိုသွားတဲ့ Academic course တွေမှာ Business logic / Business administration / Business system အကြောင်း subject တွေ module တွေထဲ့သင်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲလို graduated တွေ grading ကောင်းတဲ့ diploma holder တွေ၊ experience ရှိခဲ့ပြီးသား Programmer တွေရဲ့ Position လို့ပြောလို့ရပါတယ်။
ဒီနေရာကတော့ Architect လို့တတ်ထားပေမယ့် Project Manager / System Analyze / Technical team lead position တွေ သိပ်မကွာပါဘူး။
Programming language တော်တော်များများသိရပါမယ်။ Language တစ်ခုချင်း Framework တစ်ခုချင်းရဲ့ အားသာချက် အားနည်းချက်တွေ သိရပါမယ်။ ဘယ်လို Project ဘာနဲ့ ဘယ်လိုရေးမလည်း ဆုံးဖြတ်ဖို့ အတွေ့အကြုံကောင်းတွေ အများကြီးလိုပါတယ်။ Database ဆိုလည်း MySQL, MS SQL, Oracle, IBM DB2 အစရှိတဖြင့် နားလည်တတ်ကျွမ်းရပါတယ်။
Technical team lead လိုနေရာ Senior software engineer တွေက technical ပိုင်းပိုကျွမ်းကျင်ကြပြီး တစ်ခုချင်း အသေးစိပ်နားလည်ကြပါတယ်။ Logical thinking ကောင်းကျပေမယ့် Technical ပိုင်း coding ပိုင်း ပိုအားသန်ကျသူတွေများပါတယ်။ Architect တွေ Project Manager တွေရဲ့ အားကိုးရာ အတိုင်ပင်ခံတွေပါ။
Architech တွေ Project Manager တွေက Logical thinking အားသန်ကျပါတယ်။ Technical ပိုင်းကိုလည်း ကျွမ်းကျင်ကျပေမယ့် Tech lead တွေလိုမဟုတ်ပါဘူး။ နည်းနည်း အလှမ်းဝေးနေတယ်။ မသိဘူးမဟုတ်ဖူး ချက်ချင်းထရေးဖို့တော့ သိပ်မလွယ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သူရဲ့ Knowledge ပိုင် logic ပိုင်းတွေကြောင့် Tech Lead တွေကလည်း လေးစားရတဲ့လူတွေပါ။ မသေချာရင် Tech Lead နဲ့ ပြန် confirm လုပ်မယ်။ Customer တွေရဲ့ တောင်ပြောမြောက်ပြောတွေကို Business system ဖြစ်အောင် ပုံဖော်သူတွေပါ။
ဒီနေရာမှာ ခဏနားရအောင်။ Professional software engineer တွေ ကိုသာသာ လိုသူတွေဆီက feedback နဲ့ additional information တွေ guideline လေးတွေရရင် ပိုကောင်းမှာပါ။
ကိုယ်က ဘယ်နားရောက်နေပြီလည်း ဘာတွေပြင်ဆင်နေလည်း။ ဘာ အဆင့်မျိုး ဖြစ်ချင်လည်း နည်းနည်းသုံးသပ်ကြည့်ရအောင် းP
Footnotes and advise ပါ။
Web ရေးတာကို ဘာလို့ Professional trends မှာထဲ့မရေးလည်းဆိုရင် Software programming နဲ့ Language ပိုင်းကွာတာကလွဲရင် သိပ်မကွာပါဘူး။ Java, ASP.NET, C#.NET တွေက enterprise web application တွေမှာ သုံးတော့ Software engineering category အောက်ကိုပဲထဲ့လိုက်ပါတယ်။
Programming မှာ form နဲ့ web programming ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ Java ရော .NET မှာရော်ပါ။ ဘယ်language ကိုရွေးမလည်းဆိုရင်တော့ Basic ကောင်းချင်ရင် Java ကို အချိန်နည်းနည်းပေးပြီးလေ့လာသင့်ပါတယ်။ .NET က basic မှာ Java ထက် တတ်လွယ်ပါတယ်။ လက်ခံကျမယ်ထင်ပါတယ်။ Java basic က3to6months ကြာပါတယ်။ .NET က 1 to3months မှာ basic ရနိုင်ပါတယ်။ C / C++ ဆိုရင်တော့ တော်တော်ကြာလိမ့်မယ်။ နောက်ပိုင်းကတော့ တူတူပါပဲ။ Programming ကို first time studying ဆိုရင်ပါ။ တစ်ခြားတစ်ခုရေးတတ်ပြီးသားလူကတော့ မြန်တာပေါ့။
.NET သမားက အချိန်ရရင် Sharepoint ကိုလေ့လာသင့်ပါတယ်။ MS က Sharepoint ကို push အရမ်းလုပ်နေပါတယ်။ Booming ဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ များများသိတော့ ပြောအားရှိတာပေါ့ဗျာ :P
Design ပိုင်းကတော့ Individual skill and talent ကို ပိုအားပေးတဲ့ Trend တစ်ခုဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ Tools တွေကျွမ်းကျင်ရတယ်။ Idea ကောင်းကောင်းရှိရတယ်။ Talent လည်းလိုပါတယ်။ လေ့ကျင့်မှုနဲ့ အာရုံစူးဆိုက်မှုကသာ အဓိကလို့ထင်ပါတယ်။ သိပ်နီးစပ်တဲ့ Field မဟုတ်တော့ တလွဲကြီးတွေ အကြံမပေးချင်လို့ ဒီလောက်ပဲရပ်လိုက်တယ်။
Software engineering တုန်းကထက်စာရင် System မှာရော Networking မှာပါ ပိုပြီးရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက် များပါတယ်။ အနိမ့်ဆုံးလို့ပြောရင် Helpdesk တို့ Tier 1 NOC တို့ကစပါမယ်။ လူတိုင်းတော့ ဒီအဆင့်ကိုမဖြတ်သန်းကျပါဘူး။ Cutomer phone call တွေဖြေမယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ညာဖြစ်လို့ Exposure လုံးဝနီးပါးမရှိတဲ့ responsibility ပါ။ Help desk တို့ NOC တို့ကနေ တခြားလမ်းကြောင်းကိုသွားကျတာလည်းရှိပါတယ်။ Local တွေ သူတို့ဆီမှာ သူတို့ first job အနေနဲ့လုပ်လေ့ရှိကျပါတယ်။ foreigner ကို ဒီလိုနေရာတွေအတွက် ခန့်လေ့မရှိပါဘူး။ Fresh graduate စစ်စစ်လေးတွေပေါ့။
Administrator အဆင့်မှာ လမ်းကြောင်းကွဲပါပြီ။ MS series ကိုသွားမလား။ *nix ကိုသွားမလား။ MS professional ကပိုများပါတယ်။ Cert အရလဲ ရဖို့မခက်ခဲလှသလို Company တွေကလည်း MS Partner ဖြစ်ဖို့ MS certified တွေကို လိုချင်ပါတယ်။ Administrator က သူရဲ့ကျွမ်းကျင်ရာ Product ရှိရပါမယ်။ Exchange သမားက Exchange ကို ကောင်းကောင်း နိုင်နင်းရပါမယ်။ 1 month လောက်စာဖတ်ပြီး လုပ်နိုင်သလောက်ပဲ လုပ်နိုင်ရင် Administrator မဟုတ်သေးပါဘူး။ Tips and tweaks တွေသိရပါမယ်။ Product တစ်ခုထဲမဟုတ်ပဲ MS သမားဆိုရင် AD, eXchange, ISA လောက်ကို သိသင့်ပါတယ်။ Day to day administration တွေ user control တွေလုပ်နိုင်ရပါမယ်။
*nix မှာလဲ ဒီလိုပါပဲ။ Authentication မှာဆို RADIUS, LDAP နောက်ပြီး windbind နဲ့ cross platform authentication။ ။ ။ Mail server မှာဆိုလဲ MTA တွေအများကြီးပါ။ Sendmail / PostFix / Exim တို့ရှိပါတယ်။ တစ်ခုသိရင် နောက်တခုက လေ့လာလို့ မခက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Unix / Linux flavor က customization ပါ။ Customize လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ hands-on အများကြီးလိုပါတယ်။ Day to day administration မှာလဲ လိုအပ်ရင် troubleshooting လုပ်ရတာမို့ သေချာမသိရင် troubleshooter ကနေ trouble maker ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ :O
ကိုယ်တာဝန်ယူတဲ့ system ကို deep-down knowledge ရှိရပါမယ်။ ဒီ Step က ကိုယ်လျှောက်မယ့်လမ်းကို ရွေးလိုက်တာပါပဲ။ စိတ်မဝင်စားပဲ အလုပ်ကိုရွေးမိရင် နောက်ပိုင်းမှာ ကိုဝါသနာပါရာကို ပြန်လုပ်နိုင်ဖို့ခက်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး အချိန်တွေပုတ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ သေချာရွေးချယ် သေချာလေ့လာဖို့လိုပါတယ်။ Organization ကြီးကြီးတွေမှာ Junior သပ်သပ်ရှိပေမယ့် small local company တွေမှာ တစ်ယောက်တည်းသော administrator ဖြစ်ရင် မချောင်ပါဘူး။ သင်ယူလိုသူ အတွတ်တော့ အမှားတွေလုပ်ရင်း တဖြေးဖြေးကျွမ်းကျင်လာကြတာပါပဲ။ သက်ဆိုင်ရာ diploma / degree တစ်ခုခုအပြင် certification တစ်ခုခု ရှိရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ မရှိရင်လည်း ဒီအလုပ်လုပ်နေတုန်းမှာ လုပ်ငန်းနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ Cert တစ်ခုခု ဖြေဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် upgrade လုပ်တာပေါ့။ MNC တွေ big company တွေက well graduated degree holder တွေကို ပိုပြီး ဦးစားပေးပါတယ်။
ဒီမှာတော့ အပိုတွေပါလာပါပြီ။ Office branch တွေအများကြီးနဲ့ domain မျိုး။ Cross country domain ရဲ့ mail server တွေ။ Administrator တွေရှိပေမယ့် Engineer လိုပါပြီ။ အတွေ့အကြုံရှိတယ်။ Troubleshooting ကောင်းတယ်။ Mission critical တွေကို handle လုပ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိတယ်။ ခေါင်းအေးတယ် Reliable ဖြစ်တယ်။ အဓိကက Reliable ဖြစ်တာပါ။ မသိတာ မသေချာမရေရာတဲ့ concept တွေ မရှိတော့ပါဘူး။ အရာရာတိုင်းမှာ Prove of concept ပြနိုင်တဲ့လူမျိုးတွေပါ။ System engineer တွေဆိုပေမယ့် networking အပါအဝင် domain knowledge ကောင်းကောင်းရှိတဲ့လူတွေပါ။ Domain knowledge ဆိုလို့ AD domain ကိုပြောတာမဟုတ်ဖူးနော။ Environment တစ်ခုလုံးကို ခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်တယ့် Knowledge ကိုဆိုလိုတာပါ။ Administrator လို ကိုယ့် system အကြောင်းကိုယ်သိရုံနဲ့ မရပါဘူး။
လိုအပ်တဲ့ တခြား skill တွေ ( shell scripting, system scriptings like Perl and Python) တတ်ထားဖို့လိုလာပါပြီ။ Experience ရှိတဲ့ administrator တွေနဲ့အတူ domain knowledge သိပ်ကောင်းတဲ့ လူငယ်အချို့ကို ဒီအဆင့်မှာတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ Programming ထူးချွန်တဲ့ System Engineer တွေကတော့ သူများထက် ခေါင်းတစ်လုံးသာပါတယ်။ (Networking မှာလည်းဒီလိုပဲ) ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ Talent နဲ့ capability ကို ဒီအဆင့်မှာ စပြီးကွဲပါပြီ။
သူကတော့ Cross platform ကျွမ်းကျင်သူတွေပါ။ တခြား knowledge တွေလည်းပြည့်ဆုံတဲ့ သူတွေပါ။ Technical အားသန်တဲ့ tech lead တွေရှိသလို Software engineering က Architect လို Logical thinking နဲ့ POC ကို အားသန်သူတွေလဲရှိပါတယ်။ Multi platform ကျွမ်းကျင်သလို application တွေရဲ့ capability ကို ကောင်းကောင်းနားလည်သူတွေပါ။ Unix / Linux သိပ်ကောင်းပြီး Perl scripting တွေ C / C++ coding တွေအရမ်းထူးချွန်တဲ့ CCIE တွေ ကမ္ဘာ ပေါ်မှာ အများကြီးရှိပါတယ်။ သူတို့ကို ဘယ် Category အောက်ထဲ့ရမှန်းမသိဘူး
Footnote: Software engineering မှာထက် professional လမ်းကြောင်းပိုရှုပ်ထွေးပါတယ်။ လိုအပ်ချပ်ပိုများသလို ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်လည်းဖြစ်တက်ပါတယ်။ ပိုခက်ခဲတယ် ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဟိုယောင်ယောင် ဒီယောင်ယောင် ဖြစ်နိုင်ချေပိုများလို့ပါ။
အဲဒီမှာ စတွေ့ပါပြီ :P။ ဒီမှာတော့ Role and responsibility အကြောင်းမပြောခင် Networking အကြောင်းပဲအရင် နည်းနည်း ပြောချင်ပါတယ်။
ကျနော် အစမှာပြောဖူးပါတယ်။ MCSE က Networking စစ်စစ်မဟုတ်ဖူးလို့ ။ Networking concept နားလည်တဲ့ Microsoft system engineer ပါ။ Networking က straight-forward ဖြစ်တယ် Programming လောက် complicated မဖြစ်ဖူးလို့ ပြောကျတာ မကြာမကြာမြင်ဖူးပါတယ်။ TCP/IP properties မှာ Setting လုပ် Ping ကြည့် ရရင်ရပြီဆိုတာ Networking လို့ထင်ကျတယ်ထင်ပါတယ်။ Spanning tree အကြောင်း AS တို့ BGP communities တို့ clean-pipe service တို့ သိရဲ့နဲ့ ဒီလိုပြောတာလို့တော့ မထင်ပါဘူး။ Network တွေအကြောင်းနည်းနည်းလောက်လေရှေရရင် Switching ကစရအောင်
Small network ကတော့ Internet cyber cafe လောက်မို့လို့ လူတိုင်းသိကျပါတယ်။ Network တစ်ခုရှိမယ်၊ up to 100 nodes အထိလောက်ရှိနိုင်တယ်။ Switch သုံးတယ်ဆိုတာ Connectivity ကောင်းချင်လို့ဆိုတာထက်မပိုပါဘူး။ VLAN တွေဘာတွေမရှိသလောက်ပါပဲ (VPN နဲ့မရောပါနဲ့ Virtual LAN ကိုပြောတာပါ)။ Wireless LAN လေးရှိမယ် ဒါတောင် AP အများကြီးမဟုတ်ဖူး။ ဒီထက် Network ကြီးလာရင်တော့ VLAN တစ်ခု နှစ်ခုရှိလာမယ်။ Port Security ရှိလာနိုင်တယ်။ Manageable switch တွေသုံးလာမယ်။ Networking basic knowledge လောက်ပဲပေးနိုင်တဲ့ network မျိုးပါ။
Medium size မှာ Switch တွေများလာပါပြီ VLAN trunk တွေ Spanning tree တွေပါလာပါပြီ။ Branch တွေကြားမှာ routing လေးရှိလာနိုင်ပါတယ်။ Redundancy အကြောင်းစဉ်းစားရင်း switching loop လေးတွေ အတွက်ပါ ထဲ့တွက်ရပါပြီ။ Complicated ဖြစ်လာသလို challenging ပေးနိုင်တဲ့ network အဆင့်ရောက်လာပါပြီ။ Data center တွေကို medium size စာရင်းထဲပဲ ထည့်ရရင်ကောင်းမယ်။ ဒီ Port က ဘယ် IP တွေပဲသုံးလို့ရမယ်၊ bandwidth ဘယ်လောက်ပဲရမယ်ဆိုတာတွေ သတ်မှတ်ပြီ။ Monitoring တွေ logging system တွေနဲ့ Security နဲ့ QoS မျှအောင်ကြိုးစားရင်း နည်းနည်းချင်းရှုပ်ထွေးလာပါပြီ။
ISP level network တွေမှာ basic switching က DSL circuit တွေဖြစ်မှာပါ။ နောက်တော့ routing။ RIP v2 / OSPF / EIGRP တွေနဲ့အတူ BGP ပါလာပါပြီ။ BGP အဆင့်က CCNA အဆင့်မဟုတ်တော့ပါဘူး။ OSPF မှာလည်း Single layer / multi layer တွေရှိပါတယ်။ Terms တွေနဲ့ concept တွေသာပြောရရင် တစ်လုံးလောက်ခိုင်သွားမယ်။ Networking ဟာလည်း အတော်ရှုပ်ပြီး ကျယ်ပြန့်တဲ့ field တစ်ခုပါ။ Deep dive လုပ်လေလေ သိစရာပိုများလေလေပါ။ VoIP networking တို့ဘာတို့ ရှိသေးတယ်။
Role and responsibilities ဆီဆက်သွားရအောင်
1 ) Support Engineers
ကျောင်းတက်တုန်းက ယောင်လည်လည်လူတွေ ဒီကိုရောက်ကျပါတယ်။ းP
1.1 ) Desktop Support Engineers
သူက network လည်းမဟုတ် system လည်းမဟုတ် ။ ငါ့ desktop ကြီးဘာဖြစ်သွားလည်းမသိဘူး၊ MS office ကြီး crush သွားလို့ ဆိုတာမျိုးတွေပါ။ 25 users လောက်ပဲရှိတဲ့ company မှာ ဒီလို IT staff မငှါးပါဘူး။ Outsource လိုက်ပါတယ်။ တခြား IT company သေးသေး တစ်ခုခုကို contract နဲ့ပြန်ငှါးပါတယ်။ IT company က support Engineer ကတော့ client သုံးလေးခုကို support လုပ်ပေးရလေ့ရှိပါတယ်။ User 100+ company တွေကတော့ စဉ်းစားပါတယ်။ Cost effective ဖြစ်မယ် efficient ပိုဖြစ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ပိုင် staff ထားလိုက်ကျပါတယ်။ Engineer အတွက် technically တိုးတက်စရာသိပ်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် 1 yr လောက်လုပ်ရင် user dealing တိုးတက်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်နေရင်တောင် ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ 'ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ တစ်ခုချင်းတော့ ပြန်စစ်ရမှာမို့ နဲနဲကြာမယ်။ အစဉ်ပြေသွားမှာပါ' ဆိုတာမျိုးပြောတတ်လာမယ်။ :P ဒေါသတကြီးပြောနေတဲ့ နလပိန်းတုန်း User ကိုတောင် အပြုံးမပျက် လေအေးအေးနဲ့ တုန့်ပြန်တတ်လာမယ်။
1.2 ) Technical Support Engineer
သူလည်း သိပ်မထူးပါဘူး။ Desktop မဟုပ်တော့ပဲ Network တွေ mail user တွေကို ဖြေရှင်းရတာမျိုးပါ။ ISP တွေ Data Center မှာလည်း Support officer ထားရပါတယ်။ User screaming ကိုနားထောင်ဖို့ပါ။ :P 'မင်းတို့ဘာတွေလုပ်နေလည်း ငါ့ internet အရမ်းနှေးနေတယ်' ... 'ငါတစ်လကို 70+ ပေးနေတာ ဒီလိုအသုံးမကျတဲ့ service အတွက်မဟုတ်ဖူး' ဆိုတဲ့ user တွေ (စကားချပ်၊ mm မှာတော့ scream လို့မရပါဘူး) IP အမှားကြီးကို ping ပြီး 'ငါ့server down နေတယ်။ ဒါအရမ်းအရေးကြီးတဲ့ Production server ဆိုတာမင်းတို့ နားမလည်ဖူးလား' ဆိုပြီး အသားလွတ်လှမ်းကောတဲ့ user တွေကို deal လုပ်ရပါတယ်။ Troubleshooting နည်းနည်း လုပ်ရတတ်ပေမယ့် ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ပါဘူး။ Short training တုန်းကသင်တဲ့ မေးခွန်းလေးတွေမေး command လေးတွေရိုက်ကြည့် Log လုပ်။ ကိုယ်မဖြေရှင်းနိုင်ရင် Incident report လုပ်ပြီး အပေါ်က Upper tier support team ကိုတင် သူတို့ဆက်လုပ်လိမ့်မယ်။ သိပ်မတိုးတက်လှပေမယ့် ဒေါသတကြီးလူတွေကို အပျော်အပျော် သဘောထားတတ်လာပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော့ ယုံကြည်မှုရှိစေတာပါပဲ။
( ဘာမှမလုပ်တာထက်တော့ အများကြီးကောင်းပါတယ်။)
Support engineer ထက်တော့ မြင့်ပါတယ်။ Decision maker တွေတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ Engineer level လည်းမဟုတ်သေးပါဘူး။ သူတို့တာဝန်ယူရတဲ့အပိုင်းကို သေချာဂရုစိုက်ရပါတယ်။ သိပ်အကျွမ်းကျင်ကြီးမဟုတ်သေးသလို critical network service တွေမှာသိပ်တာဝန်ပေးလေ့မရှိပါဘူး။ ပေးရင်တောင် monitoring လိုဟာမျိုးလောက်ပဲဖြစ်ပါမယ်။ Exp နည်းသေးတဲ့သူတွေ Exp မရှိသေးပေမယ့် capable ဖြစ်မယ်လို့ယူဆရလောက်တဲ့သူတွေရဲ့ Position ပါ။ CCNA holder တွေဒီနေရာမှာ စရှိနေပါပြီ။
3 ) Associate Engineers
သက်ဆိုင်ရာ နေရာတစ်ခုမှာ well trained ဒါမှမဟုတ် ကျွမ်းကျင်အဆင့်ရောက်နေပါပြီ။ လိုအပ်တဲ့ troubleshooting တွေ လိုအပ်သလို decision making တွေလုပ်တဲ့ အဆင့်ရောက်ပါပြီ။ အားလုံးကို cover မဖြစ်သေးရင်တောင် သူနေရာမှာသူ ကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ MPLS , DSL switch circuits တွေ BGP routing ဆိုလဲ BGP ပေါ့။ Exp ရှိလာပြီးသား technician တွေ Education ကောင်းကောင်းနဲ့ CCNA တွေ ဒီနေရာရောက်လာကျပါပြီ။
4 ) Engineers
Tier2,3support တွေပါ။ CCNP တွေ5yrs exp လောက်နဲ့CCNA တွေများပါတယ်။ CCIE တွေတောင်ရှိပါတယ်။ Routing, switching, voice, Storage အားလုံးကိုနည်းနည်းဆီ cover ဖြစ်သလို area တစ်ခုကိုလည်း အတွေ့အကြုံရော ကျွမ်းကျင်မှုပါ တော်တော်ရှိနေပါပြီ။
5 ) Experts / Architects
CCIE အဆင့်တွေပေါ့။ Dump တွေကောင်းမှုနဲ့ဒီအဆင့်ရောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ Written exam ကဖြစ်နိုင်ရင်တောင်5and half hours hand-on lab exam ကတော့ တကယ်မသိနားမလည်ပဲ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ exam ပါ။ Networking ရဲ့ area တစ်ခုမှာ Guru တွေပေါ့။ Worldwide တစ်ခုလုံးမှာ CCIE holder 20000 ကျော်တယ်ဆိုရုံလေးပဲရှိပါတယ်။ ဒါတောင် လူ 20000 မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ချို့က Area2ခုမှာ CCIE2ခါရထားတာတွေရှိပါတယ်။ သူတို့ကို2ခါထည့်တွက်ထားလို့ပါ။ Most valuable certificate ဆိုတာ စျေးကြီးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့အရည်အသွေးကို ခန့်မှန်းနိုင်မှာပါ။
အရှေ့မှာပြောသလို Scripting / programming ကောင်းတဲ့ CCIE တွေရှိပါတယ်။ ဆောင်းချင်တဲ့ ဦးထုပ်ကောက်ဆောင်းပြီး blackhat / grayhat / whitehat ဖြစ်ချင်ရာကောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့သူတွေပါ။ အဲဒီ့ Linux / Unix လည်းရတယ် Programming / scripting လည်းရတယ်ဆိုတဲ့ CCIE တွေကို Network engineers အောက်မှာပဲထားသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။
Note: ဘယ် Category ထဲထည့်ရမှန်းတောင် မသိတဲ့ ဒီလိုလူတွေကို သေသင့်တဲ့လူတွေလို့ ကျနော်ကသက်မှတ်ပါတယ်။ ဘက်ဆုံထူးချွန်လို့ ကြည့်မရတာပါ :P
( ကိုစိုးမင်းကြီးလည်း မကြာခင် အဲ group ထဲပါလာပါတော့မယ် :P အခုတော့ သူ့ burglish ကျေးဇူးနဲ့ ဒီ post တွေကိုရေးပါတယ်)
ကိုမာခ့်နဲ့ တိုင်ပြောမယ်.. :P
တော်တော်ကောင်းပါတယ်ဗျို့.. pdf လုပ်ထားတယ်.
June 2009 edited June 2009 Banned Users
ရေလည်လန်းတယ်ဗျာ ... ဒါမျိုးလေးတွေ ဖတ်ချင်နေတာ ... ကျွန်တော်လည်း ဝင်ဆွေးနွေးဦးမယ် ...
Very good Articles, အတွေ့အကြုံလဲပါတယ်။ နည်းပညာလည်းပါတယ်။ ဟာသလဲပါတယ်။ ဒါဆို ဖတ်သူတွေ မပျင်းတော့ဘူးပေါ့။
တောင်တောင်ကောင်းပါတယ်ဗျို့.. pdf လုပ်ထားတယ်.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ။ မောင်ပြုံးကတော့ တောင်တောင်ကောင်းတယ်ပြောတာပဲ။ ဘာကိုကြည့်ပြောသွားတယ်မသိဘူး :P ( ညီလေးရေ မပြင်အောင် quote လိုက်ပြီ )
ဟိုးအရင်က ကိုပီဇီရေးတုန်းကလောက်တော့ မဖြစ်သေးပါဘူး။ :106:အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားထားတာပါပဲ။ မဟုတ်တာတွေ အကြံပေးမိသလိုဖြစ်မှာ အစိုးရိမ်ဆုံးပါ။ ကျနော်တလွဲတွေပြောမိရင်လည်း ထောက်ပြကြပါ။ ကျနော်တလွဲပြောမိတာကို ဖတ်တဲ့လူတွေ တလွဲကြီးသိမသွားစေချင်ပါဘူး။ ကျနော်လည်းရှာဖွေလေ့လာဆဲမို့ ကျနော့ထက် အတွေ့အကြုံဗဟုသုတ အသိပညာ ပိုကောင်းတဲ့သူတွေဆီကနေ ပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့တောင်းဆိုလိုပါတယ်။
ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ်ကို IT newbie တစ်ယောက်ကနေ အဆင့်ဆင့် ပြင်ဆင်သင့်တာလေးတွေ အကြံပေးတာမျိုးလေး ဆက်ရေးချင်ပါတယ်။ ကျနော်တစ်ယောက်ထဲရဲ့အတွေ့အကြုံဗဟုသုတက မလုံလောက်နိုင်ပါဘူး။ ( သေချာပေါက်မလုံလောက်တာပါ) အခုတော့ စာစီတုန်းပဲ။ ကိုပီဇီ ကိုစိုးမင်း ကို brb တို့ကနေ ထောက်ပြဝေဖန်ပေးကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ :67::67:
Yes correct nowaday MS SharePoint is rapidly grow. All ASP.Net web developer should be learning it. If you could well develop in SharePoint you must get high salary and easy to find out good job. Future SharePoint help WELCOME....
တကယ်အဖိုးတန်တယ်ဗျာ:6::6::6:ကျွန်တော်တို ့လို beginner တွေအတွက် ကျွန်တော်တို ့ကျောင်းပြီးရင်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတာ :D:D
အရမ်း အရမ်းကို ကောင်းပါတယ်။ ခုမှ သေချာသိသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Software Engineering နှင့် Designer ကိုပဲ သေချာနားလည်တယ်။ နောက်ပိုင်းကျ မလိုက်နိုင်တော့ဘူး နည်းနည်းရှုပ်တယ်နော် Technical Term တွေရောဆိုတော့ သိပ်မလည်တော့ လည်နေတယ် ( မလည်တာက နား၊ လည်တာက မျက်စိ ဟီးးး ) System Engineering နှင့် Networking က ဘယ်လိုကွာခြားလဲဆိုတာ သဘောမပေါက်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဟူးးးး အစ်ကို့ ရဲ့ Post ကို ဖတ်ပြီး စိတ်ဓါတ်ကျသွားတယ်။ ညီမက ကျောင်းပြီးမှ ငါ Networking လိုုုက်မယ်ဟေ့ လို့ ကြွေးကြော်ပီး ခုမှ စလုံးရေ စ Networking တက်နေတာလေ။ သူများတက်လို့လိုက်တတ်တာ မဟုတ်ဘူးနော်။ တကယ် စိတ်၀င်စားလို့၊ ဘယ်လိုလုပ်သလဲ သိချင်လို့။ ဒါပေမယ့် ငါဘာမှလည်း မသိသေးပါလား လို့ တွေးမိတယ်။ ငါ လုပ်နိုင်ပါ့မလားဆိုပြီးလည်း ကြောက်တယ်။ ပြောရင်းနဲ့တောင် ကျပ်လာပြီ ရင်ဘတ်ထဲမှာ ဟင်းးးးးးးးး
IT ဝါသနာပါတဲ့သူတစ်ယောက်က ကိုယ်ဘယ် field ကိုဝါသနာပါသလည်း ခွဲဖို့ခက်တတ်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေ ပြောတာ လုပ်တာ လိုက်မိတတ်ကြတယ်။ ကိုယ်ဝါသနာပါရာကို သိသွားပြီးလို့ တစ်ခုခု ရွေးချယ်ပြီဆိုရင် ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလည်း စဉ်းစားရတော့မယ်။
Pure networking လုပ်ချင်တာလား Systems engineering လုပ်ချင်တာလား။ Hybrid နှစ်ခုလုံးကို စိတ်ဝင်စားသလား။ ဘာတွေလိုအပ်မလည်း
Beginner ဆိုပေမယ့် Computer အခြေခံရှိပြီးသားလူ လို့ပဲယူဆလိုက်ပါမယ်။ Network engineer ဖြစ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် System သမားဖြစ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် A+ and networking basic သင်တန်းမျိုးတက်သင့်တယ်။ Self-study က အခြေခံမှာ ခက်ပါတယ်။ Solid base သိသွားပြီးရင် self-study ကမခက်ပေမဲ့ ဘာမှန်းမသိသေးပဲ ကိုယ့်ဟာကို စာအုပ်တွေရှာဖတ် ဘာတွေမှန်းမသိ ပတ်ချာလည် ကိုယ့်နားလည်ချင်သလိုတွေနားလည်နေရင် အချိန်လည်းပိုကုန်သလို အကြိုးဖြစ်ထွန်းမှုကနည်းပါတယ်။ Basic သင်တန်းတွေကတော့ TCP/IP အကြောင်းနည်းနည်း IP address တွေအကြောင်း DNS, Mail, DHCP, Web Server အစရှိသရွေ့ ဒါဘာတွေလည်းဆိုတာ သိရုံလောက်တော့ သင်ပေးလိုက်မှာပဲ။ သိပြီဆိုမှ သင်တန်းဆက်မတက်ခင်(ဆက်တတ်မယ်ဆိုရင်တောင်) နည်းနည်း self exposure အရင်လုပ်ကျတာပေါ့။
ကျနော်တို့ game ကစားရင် ပြောသလိုဆို beginner အကြီးစားပေါ့။ ပြောသမျှ သိသလိုလိုရှိတယ်။ သေချာ ဂဂဏဏတော့ မပြောနိုင်သေးဘူး။ သေချာသိအောင် Networking အကြောင်း တစ်ခုချင်းကိုလေ့လာသင့်ပါတယ်။ LAN ကနေစဖို့က မခက်ပါဘူး။ Cyber cafe လေးတွေ Game ဆိုင်တွေက Network နဲ့ကြည့်ရင် နားလည်ဖို့လွယ်ပါတယ်။ Theory အရ အားလုံးအသေးစိတ်သိအောင် လေ့လာသင့်တယ်။ DNS server setup မလုပ်တတ်သေးပေမယ့် DNS server အကြောင်း ကောင်းကောင်းကြီးသိတယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့။ Networking စစ်စစ် မဟုတ်ပေမယ့် networking မှာကြုံရမယ့် System တွေကိုသိအောင် လေ့လာရတော့မယ်။
စာတွေရှာဖတ်ပါ။ ebook တွေပဲဖြစ်ဖြစ် web ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်။ Wikipedia တို့ How Stuff Works တို့လို site တွေက ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိတယ်။ စာတွေရှာဖတ်ရင်း English နည်းနည်းတိုးတက်လာမယ်။ Technical terms တွေရင်းနှီးလာမယ်။ ကိုယ့် knowledge က smoke မဟုတ်တော့ဘူး။ Solid ဖြစ်လာပြီ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း ယုံကြည်မှုပိုရှိလာပါလိမ့်မယ်။ ဒီအချိန်ထိ လက်တွေ့အကြောင်းသိပ်မပါသေးဘူး။ Knowledge ကောင်းဖို့က first step ပါ။ Knowledge ကောင်းရင် Learning မှာပိုမြန်တယ်။ လက်တွေ့ကတော့ Cyber cafe network တစ်ခုလောက် setup လုပ်နိုင်အောင်တော့ လုပ်ထားပေါ့။ CompTIA Network+ လောက်နဲ့ညီမျှတယ့် Knowledge ကို ပြင်ဆင်ပါ။ စာမေးပွဲပါ ဖြေနိုင်ရင်တော့ လူရှိန်တာပေါ့ဗျာ။ Step 1 ကသင်တန်းတတ်နေကတည်းက သင်လွယ်တတ်လွယ် Talent ရှိတဲ့သူတွေက သင်တန်းတက်ရင်းလေ့လာရင်း သင်တန်းလည်းပြီး Step2ကိုပါတော်တော် ခရီးရောက်နေပါပြီ။ Step2မပြီးသေးရင်တောင် Support engineer အဆင့်လောက်လုပ်နိုင်နေလောက်ပြီ။
တကယ့်လေ့လာသင်ကြားရေးစပါပြီ။ Pure networking အတွက်ဆို routing / switching တွေလေ့လာကျမယ်။ Simulator တွေသွင်းပြီး စမ်းမယ်။ CCNA level ကိုရည်ရွယ်ပြီး လေ့လာသင့်ပြီ။ VLAN အကြောင်း VPN အကြောင်းတွေလေ့လာမယ်။ Inbound / outbound NAT တွေ၊ Access control list တွေ တဖြေးဖြေး Knowledge ကကျယ်ပြန့်လာပြီ။ WAN တွေက စမ်းလို့မရပေမယ့် Simulator နဲ့စမ်းလို့ရသလောက် စမ်းရင်း စာတွေဖတ်ရင်း Concept ကတော့ရနိုင်ပါတယ်။ Hand-on လုပ်လို့ရသလောက် လုပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ Theory ပဲသိတာလည်းရှိမယ်။ မသိတာတွေ အများကြီးရှိသေးပေမယ့် သိတာတွေကိုတော့ တိတိကျကျ နားလည်တတ်ကျွမ်းအောင် လေ့ကျင့်သင့်ပါတယ်။ ( Simulator ကိုတော့ CCNA အတွက်ဆိုရင် beginner မှာ Boson Netsim နည်းနည်းပိုမြင့်ချင်ရင် GNS3 ကို recommend လုပ်ပါတယ်)
ဒီအဆင့်ပြီးရင် ဘာ experience မှသေချာမရှိရင်တောင် ကျနော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ Administrator အဆင့်ရောက်ပါပြီ။ ရှေ့ဆက်ရမယ့် ခရီးအတွက် ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပေးနိုင်နေပြီမို့ ဒီမှာရပ်လိုက်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ :67:
ညီမက ကျောင်းပြီးမှ ငါ Networking လိုုုက်မယ်ဟေ့ လို့ ကြွေးကြော်ပီး ခုမှ စလုံးရေ စ Networking တက်နေတာလေ။ သူများတက်လို့လိုက်တတ်တာ မဟုတ်ဘူးနော်။ တကယ် စိတ်၀င်စားလို့၊ ဘယ်လိုလုပ်သလဲ သိချင်လို့။ ဒါပေမယ့် ငါဘာမှလည်း မသိသေးပါလား လို့ တွေးမိတယ်။ ငါ လုပ်နိုင်ပါ့မလားဆိုပြီးလည်း ကြောက်တယ်။ ပြောရင်းနဲ့တောင် ကျပ်လာပြီ ရင်ဘတ်ထဲမှာ ဟင်းးးးးးးးး
ဇင်ရေ Community is out there လေ။ အားလုံးတတ်သိနေကျတဲ့သူတွေ မဟုတ်ပေမယ့် ကူညီချင်စိတ်ရှိတယ့်လူတွေ Knowledge ဝေမျှချင်တဲ့သူတွေအများကြီးပါ။ Google မှာ လွယ်လွယ်ကူကူ ရှာလို့ရတဲ့ဟာတွေကိုကြီးပဲ repeated မေးနေရင်တော့ ကူညီတဲ့သူနည်းလိမ့်မယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ စာရှင်းပြရတာ အပန်းမကြီးပါဘူး။
Networking ကစိတ်ဝင်စားစရာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ လေ့လာလို့ မဆုံးနိုင်အောင်ပဲ။ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတစ်ယောက်အတွက် လေ့လာရတာ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ အဆင်ပြေမှာပါ။ :67:
ဦးလေး pdf လိုက်ပြီနော် ကျေးဇူး..... :D:D
အစ်ကို့ရဲ့ မျှေ၀မှုက တော်တော်လေး ကောင်းတယ်ဗျာ...
ဟိုး...ကျွန်တော် IT ကို စပြီးလျှောက်မယ်ဆိုပြီး...ကိုယ်ဘာကို ၀ါသနာပါပြီး၊ ဘယ်လမ်းကြောင်း ကိုရွေးရမယ်ဆိုတာ တော်တော်လေးကြာသွားတယ်...စောစောကတည်းက ဒီလိုမျိုးလေးသာသိခဲ့ရရင် တော်တော်ကောင်းမှာဗျာ...ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကိုယ်လျှောက်ချင်တဲ့ လမ်းကြောင်းကို လေ့လာရင်းနဲ့ ရှာတာ ၃ နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်...
ဒီ Post က Long Long Ago က ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်လည်း ခုမှ ဖတ်မိလို့ပါ။
ကျွန်တော် ကတော့ Coding တွေကို ကြည့်နေရရင် ပျော်နေတာဆိုတော့ ဘာပါလိမ့်? အဲဒီ့၀ါသနာဘဲ။
ဒါပေမယ့် ခက်တာက Language ၊ Platform ၊ Web Or Windows ၊ အချိန် အဲဒါတွေ ဘယ်လိုမှ ရွေးလို့မရသေးတာ။ ဟိုဟာတွေ့ ကောင်းနိုးနိုး ၊ ဒီဟာတွေ့ ကောင်းနိုးနိုး လျှောက်လုပ်နေတာ ၁ နှစ် ကျော်လာပြီ။
နောက်ဆုံးတော့ Language ပြဿနာမကြိုက်တာနဲ့ Pseudo ရမလိုလိုဖြစ်နေပြီ။ :P
ကို Divinity ကိုတော့ ခုလို လမ်းညွှန်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုယ့် Trend ကို သေသေချာလေး ရွေးလို့ ရသွားတာပေါ့
အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းပါတယ် အတွေ့ကြုံတွေ တော်တော် ရှိထားမှ ဒီလို ရေးနိုင်မှာပါ
ကျွန်တော် ညီလေး ညီမလေး တွေ စီကို ကူးပြီး မေးလ် နဲ့ ပို့ပေးလိုက်တယ် ခွင့်ပြုပါ
အရမ်းကောင်းတယ်ဗျို့............အရင်တုန်းက ဘယ်လိုင်းလိုက်ရမှန်းမသိတော့ဘူး....အခုတော့ Networking လိုင်းကိုရွေးလိုက်ပြီဗျို့...........ဒါပေမယ့် ဘယ်ကနေစပြီးလေ့လာရမလဲဟင် ကူညီပါအုံး